Wasiir ku-xigeenka Gaashaandhiga XFS oo la kulmay Saraakiisha Taliska 21-aad ee CXD | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir ku-xigeenka Gaashaandhiga XFS oo la kulmay Saraakiisha Taliska 21-aad ee CXD
Cadaado(SONNA):–Mudane C/llaahi Colaad Rooble Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maant gaaray Magaalada Cadaado, halkaasi oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa SONNA u sheegay in Ujeedada socdaalka Wafdiga Wasiirka ay la xiriirt u kuur-galka xaaladaha ay ku sugan yihiin Ciidamada Xoogga Dalka qeybtooda ku sugan deegaanada Galmudug,iyo sidii loo qiimeyn lahaa.
Wasiir ku xigeenka Difaaca Soomaaliya oo socdaalkiisa ay ku wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Saraakiisha Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa markii ay tageen magaalada Cadaado waxay booqdeen Xerada 21-aad ee Ciidanka Xooga Dalka halkasi oo ay kula kulmeen saraakisha iyo ciidamadooda.
Wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada oo uga waramay xaaladda guud ee ciidamada qeybtooda 21-aad ay kusugan yihiin iyo baahiyaha ay qabaan.
Mudane C/llaahi Colaad Roobel ayaa ku ammaanay ciidamada sida ay naftoodi ugu hureen difaaca Dalka iyo dagaalka lagula jiro Cadowga Umadda Soomaaliyeed ee Alshabaab.
Previous articleXildhibaannada Golaha Shacabka oo ansixiyay hindise sharciyeedka Biyaha
Next articleWasaaradda Warfaafinta Soomaaliya oo damaanad qaaday daryeelka Wariye ku dhaawcmay weerarkii Hotel Naasa-Hablood 2.